သူဌေး သားမက် ဘ၀င်လေဟပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သူဌေး သားမက် ဘ၀င်လေဟပ်
သူဌေး သားမက် ဘ၀င်လေဟပ်
Posted by ဆူး on Nov 25, 2011 in Drama, Essays.. | 40 comments
ဆူး စိတ်ကူး သူဌေးသားမက် ဘ၀င်လေဟပ်
လူမှုရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးက တော်တော် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အကြောင်း ဆူး နဲ့ ဘေးအိမ်က အန်တီနီနီနဲ့ စကားပြောမှပဲ နားလည်တော့တယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုလေ..
ဘေးအိမ်က အန်တီနီနီ တော်တော် သဘောကောင်းတယ် သူ့ဆွေမျိုးတွေဆိုလည်း အမြဲ ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးတယ် သူ့အိမ်ကိုလည်း ဆွေတော်မျိုးတော် တွေ အမြဲဝင်ထွက် စားသောက်နေတဲ့ အတွက် ဆူး နဲ့လည်း ရင်းနှီးနေကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်က ထို အန်တီကြီး ရဲ့ အမ က မွေးတဲ့သား တူ တယောက် မင်္ဂလာဆောင် ရှိတဲ့ အတွက် သူတို့ အိမ်က မနားမနေ လိုအပ်တာ ၀ယ်လိုက်ဝယ်ပေးသလို သွားချင်တဲ့ နေရာ အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်အောင် ကားတစ်စီးနဲ့ ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး လိုက်ပို့ပေးကြတယ်။ အပြန်မှာ မုန့်တွေ ၀ယ်လို့ မြိန်ရည် ရှက်ရေ စားကြ သောက်ကြ မင်္ဂလာပွဲမှာ သူများတွေ လက်ဝတ်လက်စား ၀တ်ရင် သတိုးသား ရှင်ဘက်က မျက်နှာ မငယ်ရလေအောင် လက်ဝတ်လက်စား က အစ လိုအပ်တာ ဆင်မြန်းပြီး သမီးငယ် ကိုလည်း မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကိုယ့်ဝတ်စုံနဲ့ ကိုယ် ပန်းကျဲခိုင်းတာက အစ လိုအပ်တာ လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်တော့ မင်္ဂလာပွဲ အတွက် လက်ဖွဲ့ငွေ ၃သောင်း လက်ဖွဲ့ ပေးလိုက်တယ်။ သတိုးသမီးရှင်ဘက်ကလည်း အတော်လေး ချမ်းသာတဲ့ တောသူဌေးတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ သူတို့ မြို့မှာ သူတို့ မိသားစုက အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်တွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတော့ အမောင် သတိုးသား အလိမ်မာ အိမ်ပါ အနေနဲ့ ထိုနယ်မြို့ကလေးကို လိုက်သွားပါတယ်။ မကြာပါဘူး သတိုးသမီး ဘက်က သတင်းကြားလာတယ် ၃သောင်း လက်ဖွဲ့တာ နည်းတယ်တဲ့.. အန်တီနီနီ တို့ သတင်းကြားပြီး ဒေါသတွေ ထွက်ပါတော့တယ်။ သူတို့ မိသားစု ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သပ်သပ်ယပ်ယပ် ဖြစ်အောင် အများကြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်အောင် အစအဆုံး ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စိုက်ပြီး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အပြင် သမီး လုပ်သူကို ပန်းကျဲ ခိုင်းတာတောင် ပန်းကျဲခ အနေနဲ့ သူတို့ဆီက ပြန်မယူခဲ့တဲ့ အပြင် ကိုယ့်အ၀တ်အစားနဲ့ ကိုယ်ဝတ်ပြီး ကူညီခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးမှ မထောက် ဒီလို ပြောရလား ဆိုပြီး ဒေါတွေ ကန်နေကြလေရဲ့.. သူဌေးသားမက် ဖြစ်လာတော့ အမောင် ပြောင်ရောင်လာပြီလေ အမျိုးတွေကို လှည့်ပြီး အဒေါ်လေးတွေကို ပုဇွန်ထုတ်ကြီးကြော် စားချင်တယ် ကြော်ပို့ပေးပါ။မနက် ကြော်ပြီး ကားဂိတ်ကနေ ပို့ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ သူ့ယောက္ခမကြီးတွေက ငါးရံ့ခြောက်ဆို တခြားက မကြိုက်ဘူး ဒေါ်လေး လုပ်တဲ့ဟာပဲ ကြိုက်တယ် အဲဒီ ငါးရံ့ခြောက်လေး လုပ်ပေးပါ ဆိုတော့လည်း အမျိုးဆိုတော့ စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်နဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြည့်စည်းပြီး တဖက် အမျိုးတွေ ကြားထဲ အဆင်ပြေအောင် မျက်နှာ မငယ်ရလေအောင် လုပ်ပေးကြတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာလို့ လုပ်ပေးကြတယ် ထင်ပုံရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဖတ်ဖတ်မောအောင် လုပ်ပေးကြတဲ့ အန်တီ တို့ ညီမတွေ စကားလက်ဆုံကျတော့ သူတို့ လုပ်ပေးရတဲ့ အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို လာရင် အဒေါ်တွေ အတွက် ပါတဲ့ လက်ဆောင်ကတော့ ပဲကြီးလှော် ၅၀သား တယောက် တထုတ်ပါပဲ။ အဒေါ်တွေက ငါတို့ သွားမကောင်းဘူး နင့် ပဲကြီးလှော် စားလို့ မရဘူး ဆိတ်သားခြောက်လေး ဘာလေး ၀ယ်ခဲ့ဟယ် ဆိုတော့ တခါတော့ ပါလေရဲ့ ဆိတ်သားခြောက် နောက်များတော့ လာရင် ပဲကြီးလှော် ၅၀သားပဲ ပါလာတော့တယ်။ အန်တီက ပြောတယ် လက်ဆောင်မပါလည်း အရေးမကြီးပါဘူး မကြိုက်ပါဘူး မစားပါဘူး ပြောထားတာကို ခပ်တည်တည် နဲ့ ဟန်တလုံး ပန်တလုံး လုပ်ပေးတာ တော့ မကောင်းဘူးတဲ့။ စေတနာ မေတ္တာတွေနဲ့ ပေးတာ အကုန်ယူပြီး တုံ့ပြန်တာ နည်းတော့ အမျိုးတွေ မေတ္တာ ခန်းခြောက်လာကြသလို ဖြစ်နေပြီ။ သူ့ စိတ်ထဲမှာတော့ လူချမ်းသာ တယောက် အဖြစ်နဲ့ ဘ၀င်မြင့်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကတော့ မမြင့်နိုင်ရှာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အန်တီနီ ရဲ့ သမီး မင်္ဂလာဆောင်မယ် ဆိုတော့ ဆူး တို့လည်း သဘောကောင်းတဲ့ သူတွေ ဆိုတော့ လိုအပ်တာ ကူညီနိုင်တာ ကူညီပေးပါတယ်။ အန်တီ အိမ်ကို ၀င်ထွက် သွားလာပြီး လုပ်ပေးနိုင်တာ လုပ်ပေးနေတော့ အန်တီ စိတ်တိုနေတာ တွေ့တော့ အန်တီ ဘာတွေ စိတ်တိုတာလဲ မေးမိတော့မှပဲ ရေလည်တော့တယ်။ သူ့သမီး မင်္ဂလာဆောင် ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က ၃သောင်း လက်ဖွဲ့တာ နည်းတယ် ဆိုပြီး အသံပေးနေကြတဲ့ အမျိုးတွေက လက်ဖွဲ့ငွေ ၁သောင်း ဆိုပြီး စာတမ်းလေး ပါတဲ့ စာအိတ်လေး ရောက်လာလို့ ဒေါတွေ ပွနေတောတာပါပဲ။ အခု မင်္ဂလာဆောင် လာမဲ့ အမောင် သူဌေးသမက် ရဲ့ အမေ နဲ့ နှမတွေကိုလည်း ပွဲတက် အ၀တ်အစား တစုံစီ ချုပ်ပေးရတာနဲ့ မိတ်ကပ် အလှဆင်ပေးရမှာနဲ့ သူ ကုန်ကျ သွားတာ မနှမြောပဲ စေတနာ ရှိရှိ လုပ်ပေးခဲ့တာ အမှတ်မထားပေမဲ့ ပြန်လည် အမှတ်ရ တွေးမိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က ၃သောင်း နည်းတာ အခု လက်ရှိ ၁သောင်း က များလွန်းနေသလားတောင် တွေးပြီး ရီစရာကြီး ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ ဆူး ကတော့ ကိုယ့် အမျိုး မဟုတ်တော့ ဘာမှတော့ မပြောလိုက်ပါဘူး သူ့ အမျိုးနဲ့ သူဆိုတော့ ဒေါသဖြစ်လည်း ခဏဆိုတော့ သိပ်လည်း မပြောချင်ပေမဲ့ ရွာထဲမှာတော့ ဖောက်သည် ချလိုက်ပါသည်။
ဖြစ်ခွင့်ရသေးရင် သူဌေးသမက်တော့ မလုပ်ချင်ဘူး သူကြီးသမက်တော့ လုပ်ချင်သား
သဂျီးသမက် ဖြစ်ခြင်တဲ့သူတွေ မှတ်သားကြပါ
ဖင်မှာပွေးကွက်နဲ့ သဂျီးသမက်တဲ့ကွဲ့ မှတ်သားကြကုန်လော့
ပွေးက မနေ့ ကလေးတင် ပျောက်သွားတာ….ဒီလိုမှန်းသိ မွေးထားပါတယ်
သဂျက်သမီး ဖစ်ချင်ဒလယ်ပေါ့ …
၂လုံး ၁ပြူးနော် ကြောက်ဝူးလား …မေ့နေမှာစိုးလို့ ပြောဘာဒယ် ..
လောကကြီး တမက်ကို ယောက်ထမ က ရက်ရက်ချက်ချက် လုပ်ရက်ပါ့မလား
အဲဒီ ပြူးကြီး အမွေလိုချင်လို့လေ
အပြူးကြီး အမွေတောင်းဖို့ချောင်းတဲ့ သမက်လောင်းနဲ့ တွေ့နေဘီ…
မင်္ဂလာဆောင်မှာ“ ဘီလူး ”အသားနဲ့တော့ ဧည့်မခံနဲ့နော် ရွံတတ်လို့…..
မင်္ဂလာဆောင် ကို ဘီလူး က ဘာလို့ ပန်းလာကျဲချင်ရတာလဲ.. ပွဲလာတဲ့ လူတွေ လန့် ပြေးကုန်အုန်းမယ်။
ဂီ ပိုစ့်မော်ဒန် မားကတ်တင်းနည်းပညာနဲ့
ဒါ့ပုံကတော့ ကျန်တဲ့ဆြာတွေ ရိုက်လိမ့်မယ်…
ဂီ့ တော်ကီ နဲ့ချို ဖစ်တယ် မလားဟင်င်င်……
အဲဒီ ဦးကြီးသာ ဘိသိတ် လုပ်ရင် မင်္ဂလာဆောင် ဘာတွေ ပြောမှန်း မသိဘူးဆိုပြီး လူတွေ ပူညံ ပူညံ လုပ်ကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်နော်။
အမလေး.. သူများ မင်္ဂလာဆောင်ကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဆူး မင်္ဂလာဆောင် ဖြစ်လာကြတာလဲ.. လမ်းကြောင်းတွေ လွဲကုန်ပြီ.. ကိုရှုံးက ဘိသိတ်ဆရာ မငှားရသေးဘူးတဲ့
သံစဉ်တွေ တူနေပြီ ဆူးရေ။
ကိုယ့်ဘက်က မတွက်မချက်ပဲ စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတာကို စားပြီး နားမလည်လုပ်တော့ လုပ်ပေးပြီးမှ ဒေါသထွက်ရတယ်။
`ကိုယ်က သူတပါးအပေါ် ပြုဖူးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကို မေ့ထားပါ။ သူတပါးက ကိုယ့်အပေါ်ပြုဖူးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကို မှတ်ထားပါ´ တဲ့။
တကယ့်တကယ်မှာကျတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာက များတယ်။
ကိုယ်ရှာလို့ ချမ်းသာတာလည်း မဟုတ်။ သူဌေးသမီးယူပြီးတော့ ဘဝင်မြင့်နေတာ မရှက်ဘူးလားမသိ။ ဘဝကို အောက်ဆုံးကတက်လာပြီး သူဌေးဖြစ်သူတွေ အများစုကတော့ ဘဝင်မြင့်တာ သိပ်မတွေ့ ရပါဘူး။ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ခေတ်ပျက်မှာ သူဌေးဖြစ်သူ အများစုကတာ့ ဘဝင်လည်းမြင့်၊ မောက်လည်း မောက်မာကြတယ်။
ဆူးရေ တချို့လူတွေက ယူပဲယူတတ်တာ ပြန်မပေးတတ်ကြဘူး။ ကိုယ်ရဖို့ပဲ ကြည့်တော့ သူများပေးဖို့ကို ကြာလေ တွန့်တိုလေ ဖြစ်ပြီး လူအမြင်ကပ်စရာ ဖြစ်လာရော။
ချဉ်ဖတ်ကလေးတော့ တွေ့ နေပြီ
အိုးးး မောင်ပေရယ်…။ သုံးတစ်တဲ့ ကြားလား မွေးထားဥိးဟ
အဘနီတော့ အချီကြီး ပွပေါက် တိုးတော့မယ် ထင်တယ်။ သုံးတစ် ဆိုတော့ သစ်တုံး.. သစ်တုံး ကို တလုပ်ဘက်ကို ရောင်းရင် ပိုက်ပိုက်ရတယ်။ ပျဉ်းမနားဘက်က သစ်ပေါတယ် ဆိုပဲ ကြားဖူးတာပဲ..
ဒီမယ်ရွာတော်ရှင်ဒေါ်ဆူး၊ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာဝေမယ့်အခမ်းအနားမှာပဲ အ၀လာတီးဖို့ မကြံစည်နဲ့၊လက်ဖွဲ့ဖို့လဲ များများစုထားဦး၊
အ၀တီးတယ် ဆိုတာ လက်ဖွဲ့ဖို့ အတွက် အရင် လေ့လာရေး ဆင်းတာလေ.. ဟိဟိ.. စုထားပါ့မယ်..
တစ်ခါတစ်ခါ အတုက အစစ်ထက် ပိုမာန်ပါတယ် ဆိုဘဲ။
အင်း လွှတ်တော်တတ်တဲ့ အမတ်မင်းများ သူဌေးသားမက် စတိုင်လ် မဖြစ်ဖို့ပါပဲ..
အဲ လွှတ်တော်ရောက်သွားတော့ လေသံက တစ်မျိုး…
ဒါမျိုးတွေ များတတ်ပါတယ် ကျုပ်တို့ဆီမှာ….
သဂျီးသားမက် မဖြစ်ခင်က တစ်မျိုး..
သဂျီးသားမက်ဖြစ်တွားတော့ တညိုး.. မလုပ်ကြရင် ပီးတာပါပဲ..
မဆူးရေ ၊ ကျီးကန်ရှင်ကြီး ကတော့ ကျေးဇူးဆိုတာကိုအောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာဖတ်ဘူးပါသည်။
ကျေးဇူး = သူတစ်ဦးမှ သူတစ်ထူးသို့ ပြုဖူးသော မေတ္တာ စေတနာ တဲ့။
သည်လိုအပြန်အလှန် မထားနိုင်မှတော့၊ကျေးဇူး မဖြစ်ဘူး၊ကျေးဇူးမဖြစ်မှတော့ ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူး၊ ကောင်းကျိုးမဖြစ်မှတော့၊မင်္ဂလာ တရားမဖြစ်ဘူးပေါ့၊သည်တော့ မင်္ဂလာမဖြစ်မည့်အတူတူ အမင်္ဂလာ မဖြစ်စေဘို့ ဝေါင်ဝေါင် ရှေး၊ဝေးဝေးရှောင်ပြီး၊ မချစ် မမုန်း ပြုံးပြုံး ကလေးနဲ့ ဥပက္ခာ သာပြုလိုက်ရင်၊ ဒေါမနဿပွားစရာ ညိမ်း မှာပါဗျား လို့ ၊(တွံတေးသိန်းသံလေသံကလေးနှင့်) အဲသည်အန်တီကြီးကို အကြံပြုလိုက်ပါသဗျား။
အန်တီဆူးက ဒေါသမထွက်တတ်ဘူး၊ အင်တာနက်မှာ ဖွယုံလေးပဲ။
ငွေတသောင်းဆိုတာ တောမှာထက် ငါးဆလောက် အသုံးခံတယ်။ ဒီတော့ သူတို့လက်ဖွဲတာကို တသိန်းခွဲလို့ မြင်ကြည့်။ ဆူးအသိ အန်တီလက်ဖွဲ့တဲ့ သုံးသောင်းကြတော့ မြို့ပိုက်ဆံ မြို့မှာပြန်ကုန်ခဲ့ရလို့ သုံးသောင်းပဲတန်ဒယ်။။။ ငွေရေးကြေးရေးအကြောင်းလဲ ဘာမှမသိ…
ဦးမာဃ လူ.ပြည်ရောက်တုန်းမို.လို. မှတ်သွားပါတယ်။
ထို သူဌေးသမက်အပါအ၀င် ရွာသူရွာသားများအားလုံးကိုပေါ့
” ဒီလိုနဲ့ အန်တီနီ ရဲ့ သမီး မင်္ဂလာဆောင်မယ် ဆိုတော့ ဆူး တို့လည်း သဘောကောင်းတဲ့ သူတွေ ဆိုတော့ လိုအပ်တာ ကူညီနိုင်တာ ကူညီပေးပါတယ်။ အန်တီ အိမ်ကို ၀င်ထွက် သွားလာပြီး လုပ်ပေးနိုင်တာ လုပ်ပေးနေတော့ အန်တီ စိတ်တိုနေတာ တွေ့တော့ အန်တီ ဘာတွေ စိတ်တိုတာလဲ မေးမိတော့မှပဲ ရေလည်တော့တယ်။ ”
သူတို့ ပြဿနာက ပြီးသွားပြီလေ ခု ဆူးက သူတို့ကိုကူညီနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ရွာတော်ရှင် လေး အလှည့်ကြတော့ အန်တီကြီး ဘယ်လို့ ပန့်ပိုးပေးလဲကြည့်ရအောင်နော့် ထင်သလိုမဖြစ်ရင် လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ ထပ်ဖွကြတာပေါ့ …..
သူများ ဆီက ဆူး မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ့်အိမ်က ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်ရှိမှ ထမင်းစားဖို့ သေချာသလိုပေါ့။
လူတိုင်းထဲမှာမှ လူတချို့သာ ပါးစပ်က ထွက်တဲ့ စကားတိုင်းကိုသာ အတည်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တတ်ကြတာ.. သူများ ကိုသာ အပြစ်တင်ပြီး ကိုယ့်အလှည့် သူများ ထက်ဆိုးတဲ့ အမူအရာ လုပ်မိရင်တောင် ငါအပြစ်ပြောမိတာထက် ဆိုးနေပါလားလို့ လုံးဝ မတွေးတတ်ကြပါဘူး။
လက်တွေ့ မပါသေးတဲ့ စကားတိုင်းကိုသာ အတည်ယူပြီး လိုက်ယုံရရင် ရူးသွားမှာပေါ့။
တကယ်ဖြစ်လာတော့မှ.. ဘယ်သူက အပြောနဲ့ အလုပ်တူသလဲ ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိသာပါလိမ့်မယ်။
ကျောကျရိုက် ကျောကျရိုက် …
ချစ်စိတ်ကူးလည်း တ၀ဲ လည်လည်.. ဘယ်စီနေမှန်း မသိတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ သူများကို မစွ ကြနဲ့နော်..
မမရဲ့ လက်ဖွဲ့တွက်နည်း ပို့စ် ကို သတိရမိတယ် အန်တီဆူးရေ။
အင်းဒီလူတွေ မမရဲ့ လက်ဖွဲ့တွက်နည်း ဖတ်မထားရသေးတာ ဖြစ်မယ်ဗျို့။
နောက်တခါ မင်္ဂလာဆောင် သွားရင် လက်ဖွဲ့ မပေးတော့ဘူး အလကားပဲ သွားစားတော့မယ်။
ကြေးမလောင် ဆိုတော့ ကြောင်မလေးပေါ့။
ကြောင်လတ်က ငါ့ ကိုအရင်သတိမရဘူး၊တကယ်ဝါးမဲ့ကြောင်ကြီး အရင်သတိရတယ်၊
ကြောင်ကြီးတို့ ကြောင်ဖက်တီးတို့ ကိုကျော်ပြီး ငန်းလိုက်ဦးမယ်
ဟေ့ …. ကြောင်မလေး ကြောင်မလေး……. နင်အထီးလား၊ အမလား?
သြော် small cat ကလဲ
ကြောင်မလေးပါဆိုမှ အမဖြစ်မလား အထီးပေါ့